Posted by Tranquillus | Oct 26, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Noloshaada xirfadeed, inta badan waa inaad qortaa iimaylka mudaharaadka. Tan waxaa loola hadli karaa saaxiib, lammaane ama alaab-qeybiye. Ujeedo kasta ha ahaatee, waa inaad xisaabta ku dartaa shuruudaha qaarkood oo ay si dhab ah u qaataan kuwa kula hadlaya. Sidaa darteed, in la barto qoraalka fariinta noocan ah waa lama huraan. Waa kan sidaad ugu guulaysan lahayd iimaylkaaga mudaaharaadka.
Xooga saar xaqiiqada
Markaad qorayso iimaylka mudaaharaadka, waa muhiim inaad si adag uga hadasho xaqiiqooyinka. Si kale haddii loo dhigo, curiyayaasha waa in loo soo bandhigaa si dhab ah si uu akhristuhu dhaqso u fahmo macnaha guud.
Haddaba, iska ilaali tafaasiisha iyo weedhaha aan loo baahnayn, taa beddelkeedana caddee waxyaalaha muhiimka ah sida xaqiiqooyinka iyo taariikhaha. Runtii waa walxahan in qaatahahu awood u yeelan doono inuu fahmo ujeedada iimaylkaaga. Waa inaad keentaa xog cad, sax ah oo taariikhaysan.
Muuji macnaha guud ka dibna mawduuca iimaylka
Si toos ah ugu gudub barta marka aad qorto iimaylka mudaharaadka. Uma baahnid ereyo sida "Imaylkan ayaan kuu soo qorayaa" sababtoo ah kuwani waa waxyaabo muuqda oo aan u baahnayn in la tilmaamo.
Ka dib markii aad si cad u soo bandhigtay xaqiiqooyinka dhaliyay cabashadaada oo aanad hilmaamin taariikhda. Waxay noqon kartaa kulan, siminaar, iimaylo is dhaafsi, warbixin, iibsi alaab, rasiidh qaansheeg ah, iwm.
Sii wad, adigoo u sheegaya waxaad filayso sida ugu cad ee suurtogalka ah.
Fikradda ayaa ah in qaataha si dhakhso ah u fahmi karo ujeedada iimaylkaaga iyo waxa aad ka rabto.
U fiirso miyir-qabka hadalkaaga
Qoritaanka iimaylka mudaaharaadku waxay u baahan tahay miyir-qab iyo qaab kooban. Sababtoo ah tani waa xaalad gaar ah, waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto xaqiiqooyinka iyo waxa aad filayso. Si taas loo sameeyo, isticmaal jumlado gaagaaban oo soo koobaya dulucda loolankaaga oo ku qoran luqad maalinle ah oo asluub ​​leh.
Sidoo kale, hubso inaad isticmaasho weedh asluubaysan oo ku habboon munaasabadda. "Daacadnimo," iyo "salaan wanaagsan" waa in laga fogaadaa isweydaarsiga noocan ah.
Hubi inaad xirfadle ahaan lahayd marka aad qorayso iimaylka mudaharaadka, xataa haddii aad aad u faraxsanayn. Waa inaad ku dadaasho sida ugu fiican si aad naftaada u xakamayso sababtoo ah shucuurtu run ahaantii kuma jiraan qoraal xirfadeed.
Haddaba, iska ilaali inaad isticmaasho erayo muujin kara dareenkaaga si uun ama si kale. Waa muhiim in iimaylkaagu ahaado mid xaqiiqo ah.
Ku lifaaq caddaynta
Ugu dambayntii, si aad ugu guulaysato iimaylka mudaaharaadka, waa lama huraan inaad ku lifaaqdo caddaynta doodahaaga. Runtii waa inaad tustaa qaataha inaad xaq u leedahay inaad muran gasho. Markaa ku lifaaq dukumeenti kasta oo aad caddayn ahaan u isticmaali karto kuna sheeg iimaylka.
Sirta iimaylka mudaaharaadka oo si wanaagsan loo qoray Oktoobar 26th, 2021Tranquillus
horeAbuur su'aalahaaga suuqgeyneed ee 1aad
socdaBoostada xirfadeed: Xeerarka qaar ee foomamka wacitaanka caadiga ah